Xildhibaan Barre Hiiraale oo ku xiran magaalada Doolow ee ismaamulka Somalida Itoobiya. – Radio Daljir
Xildhibaan Barre Hiiraale oo ku xiran magaalada Doolow ee ismaamulka Somalida Itoobiya.
Doolow, May, 16 – Waxaa in muddo ah ku xiran magaalada Doolow ee ismaamulka Somalida Itoobiya xil. Barre Adan Shire (Hiiraale) oo ah xildhibaan ka tirsan dawladda federalka Somaliya, Waxaana xildhibaanka xiray ciidamada dawladda Itoobiya ee halkaasi jooga.
Sida ay idaacadda Daljir u sheegeen odayaal ay isku hayb yihiin oo jooga gobolka Gedo Col. Barre Hiiraale waxaa la xiray ka dib markii uu muran dhexmaray isaga iyo saraakiil Itoobiyaan, murankaas oo la xiriiray habka loo dagaal galinayo ciidamada dawladda federalka ee ka dagaalamaya gobolkaas.
Odayaasha ayaa intaasi ku daray in xarigani dhacay labadii bishan May, uuna wali Barre Hiiraale ku jiro xabsi ku yaalla magaaladaasi. Ma cadda sababta dhabta ah ee loo xiray barre Adan Shire oo muddooyinkii dambaba ku sugnaa gobolkaasi Gedo.
Xildhibaanka ayaa ka mid ahaa saraakiisha hoggaaminaysa ciidamada dawladda federalka ee dhawaanahanba ka dagaalamayey gobolka Gedo ee koonfur galbeed Somaliya, halkaaso oo dagaal ku dhexmaro ciidamada dawladda iyo ururka Al-shabaab.
Col. Barre Adan Shire Hiiraale ayaa ka mid ahaa hogaamiye kooxeedyadii Somalida waxaana uu madax ka ahaa ururkii dooxada Jubba ee magaalada Kismaayo ka qabsaday malleeshiyaadkii Gen. Max?ed Siciid Xirsi (Moorgan). Hiiraale laftiisana waxaa Kismaayo kala wareegay ururka Al-shabaab kadib dagaal dhiig badani ku daatay; waxaana Hiiraale uu u diga-rogray gobolka Gedo oo uu joogay wixii xilligaasi ka dambeeyey.